jeudi, 17 mai 2018 20:40
Antenimieram-pirenena: Fandaniana volavolan-dalana miisa 04 ny alarobia 16 may 2018
Rehefa avy nodinihina sy nolaniana tamin’ny Asam-baomiera ny Talata 15 may 2018 dia lany teo anivon’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza, ny alarobia 16 may 2018 tontolo andro ny :
- Projet de loi N°033-2016 du 17 août 2016 autorisant la ratification de l’Accord d’établissement de la Commission Mixte entre la République de Madagascar et la République de Maurice.
- Projet de loi n°034-2016 du 17 août 2016 autorisant la ratification de l’accord Cadre Général de Coopération entre la République de Madagascar et la République de Maurice.
- Projet de loi N°050/2017 relative aux zones maritimes de l’espace maritime sous la juridiction de la République de Madagascar.
- Projet de loi N°051/2017 du 21 décembre 2017 sur le Code de la pêche et de l’Aquaculture.
jeudi, 17 mai 2018 20:11
Mpilatsaka an-tsitrapo: Amerikanina 44 mianadahy nanao fihanianana
Nampanao fihanianana mpilatsaka an-tsitrapo tao amin’ny Corps de la Paix miisa efatra amby efapolo ny Mpiandraiki-draharaha Amerikanina Stuart Wilson ny andron’ity alakamisy 17 mey 2018 ity; izany dia natao teny amin’ny toeram-piofanana Mantasoa. Hiasa eo amin’ny sehatry ny fambolena sy fahasalamana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo.
Nahavita fiofanana nandritra ny telo volana izy ireo; fiofanana momba ny fomba sy teny malagasy, ary teknika mifanaraka amin’ny sehatra misy azy ireo. Izao izy ireo dia vonona ny hiasa any amin’ny tanàna izay hiasan’izy ireo mandritra ny roa taona.
jeudi, 17 mai 2018 20:10
Nakaton'ny mpitokona io maraina io ny DREN DIANA sy ny Cisco ary Faritany.
jeudi, 17 mai 2018 15:51
LTP Mahajanga: Tonga namaha olana ny delegasiona avy any Antananarivo
Faha-efatra herinandron'ny fitokanana sy nahatapaka ny fampianarana teo anivon'ny LTP Mahajanga, tonga taty an-toerana ny avy amin'ny ministera mpiahy izay notarihin'ny sekretera jeneraly namaha ny olana.
Navory ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny tompon'andraikitry ny sekoly ary ireo mpitokona an-kilany. Naharitra ora maromaro ny fifanazavana.
Efa nampifanatonina ihany koa ny mpitantana ny sekoly sy ireo mpikomy ny tapak’andro maraina.
jeudi, 17 mai 2018 15:37
Antsirabe: Nakaton'ny ANEFA ny biraon'ny CISCO sy DREN Vakinankaratra
Mitokona ireo mpampianatra mivondrona ao amin’ny ANEFA Vakinankaratra io maraina io.
Nanomboka tao amin’ny Cisco Antsirabe faharoa izany ary nitohy tao amin’ny Cisco Antsirabe voalohany sy ny lisea ary dia tao amin’ny DREN Vakinankaratra no nifarana.
Nakaton‘ireo mpampianatra ny biraom-panjakana ary nanazava tamin’ireo mpiasa ny mpitarika fa fitakiana hiraisana no atao ka miangavy anareo hanatevina ny fitokonana dia ny fanitsiana ny mari-karama sy ny fandoavana ny “subvention”, ary ny famerenana ny fandraisana ireo mpampianatra ho 10.000 isa indray.
Fianarantsoa: Mitombo fahasalamana i Elisabeth kely
Nivoaka ny hôpitaly ny andron'ny 19 aprily lasa teo i Elisabeth kely, zaza 15 volana voatifitry ny dahalo tao Isandra.
Mamaly amin'ny fiantsoana azy i Elisabeth saingy tsy afaka miteny izy taorian'ny dona nahazo azy ary malemy ihany koa ny ilany havanana.
Mankasitraka an'ireo rehetra malala tanana nandray anjara tamin'ny fitsaboana, sy ireo rehetra nitondra am-bavaka azy ny ray aman-dreniny ary manao antso avo amin'ny Fitsarana sy ny Fitondrana mba hanara-maso ny fampiharana ny lalàna momba ireo nahavanon-dratsy nanafika azy ireo.
Notsaboina teny amin'ny Hopitaliben'i Tambohobe i Elisabeth, zazavavikely vao 15 volana, noho ny ratra sy dona nahazo azy tamin'ny tifitra nataon'ny dahalo azy ny tolak'andron'ny zoma 16 marsa lasa teo tany Isandra.
jeudi, 17 mai 2018 14:45
Tetikasa Vitatsika io: 800 pejy, Atsangana ny toerana fanarahamaso ny tetikasa
Efa vonona ny Tetikasa rehetra ampandrosoana an'i Madagasikara, mahakasika ny sehatra lehibe eto amin'ny Firenena. Mahatratra 800 pejy izy io, 10 taona no nanomanana azy, nakana hevitra tamin'ny sehatra maro, nidinana ifotony, nanaovana fikarohana, ao avokoa ny fanazavana ny politika ankapobehany, ny tantara, ny Tanjona, ny fomba anatratrarana azy, ny olona sy ny fahaiza-manao ilaina, ny teknolojia ampiasaina anatanterahina azy, ny fitaovana sy ny teti-bola ary ny vola enti-manana, ny tetiandro ary ireo maridrefy na indicateur ahafahana mandrefy ny vita sy ny tsy vita.
Ho Atsangana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, ny toerana fanarahamaso ny tetikasa, centre informatisé contrôle réalisation projet.
jeudi, 17 mai 2018 11:46
SOS Fahasalamana: Nifanintona dia main’ny rano mafana i Jean Michel
Zazalahy kely 7 taona i Rakoto Jean Michel, mila tolo-tànana izy noho ny fahamaizana nahazo azy.
Manana aretina mifanintona ity zaza ity ka nandritra ny fotoana nampihetsika ny aretiny no nilatsaka tao anaty rano mafana ny tanany.
Monina eny Ampasika Mahajanga ity zaza ity, miantso ireo tsara sitrapo sy malala-tanana ny ray aman-dreniny ho fanampiana amin'ny fitsaboana azy.
Laharan'ny finday ahazoana ny reniny, Rtoa Nambinina 032 90 033 84.
jeudi, 17 mai 2018 11:18
Zandarmaria: Mandray ny fibaikoana ny CIRGN Mahajanga ny Kolonely Boto Lucien Maurice
Vita omaly maraina 16 mey ny famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny fari-piadidian'ny Zandarmaria eto Mahajanga vaovao sy teo aloha. Teny amin'ny Toby Kolonely Jean Philippe no nanatanterahana izany.
I Kolonely Boto Lucien Maurice indray no hisolo toerana ny Kolonely Behivoka Fiederch izay nitantana ny fari-piadidiana teo aloha. Ity farany izay voatendry hiasa any Antsiranana.